May 2009 ~ စန္ဒကူး
နှိုးစက်အသံအောက်မှာ ဦးနှောက်ကအလုပ်စလုပ် စိတ်ကနိုးထဖို့သင့်ပီ
ခေါင်းထဲကနေ့တဓူဝ အရေးတွေးကာစီစက် တွက်ချက်တဲ့ခဏ
ခေါင်းသေးသေးလေးနဲ့ပင်လယ်ကူးတတ်တယ် တဲ့ ပုဇွန်ဆိတ်လေးကို
အဖာတစ်ရာနဲ့ အဆင့်ဆင့်ထိုးနှက်ခံထားရတဲ့ ငါ့ရင်ထဲငါဘာကြောင့်ဝင်မကြည့်မိပါလိမ့်။
စင်ပေါ်ကဇတ်ရုပ်၊ သူ့ခွင်နဲ့သူ ကကြိုးတွေဆင်.. သူ့ဇတ်သူမျော
သူပျော်ပျော်၊ သူမော်မော်… ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တစ်ရောက်လို အညှို့ခံဘ၀နဲ့
စည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်က ရွှေစွန်ညိုလိုဝဲနေရတဲ့ဘ၀ ငါခါးသီးလိုက်ချင်တယ်။
ပူစပ်စပ်စကားလုံးတွေနဲ့ အခါခါလောင်းချခံထားရတဲ့ ငါ
Posted by စန္ဒကူး at 11:39 PM
၀င်စားနေတာရယ်နဲ့ရုံးကပြန်ရောက်ရင်FarmTownမှာအလုပ်ရှုပ်ပြီးသီချင်းလေးနားထောင်နဲ့အဆင်ကိုပြေနေတာပါဘဲ။ Rapသီချင်းလေးတွေကိုကျွန်မကြိုက်တတ်သလိုFeaturingလေးတွေနဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးတွေဆိုအရမ်းသဘောကျတာ။ အွန်လိုင်းမှာသာနေပြီးမမွှေနှောက်တတ်ပြန်တော့ဘာမှမသိဘူး၊ပိန်းတယ်ပြောလဲပြောချင်စရာပါ။ရေဒီယိုဝဘ်ဆိုက်(၂)ခုရ
တော်ဘူးပြောရမလား၊ လူငယ်လေး တွေဆိုထားတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဆင်ဆာ မိ/မမိတော့မသိဘူး။
တော့တော်တော်အသံကောင်းပါတယ်၊ကောင်မလေးတွေရောပါ။စာရေးနေရင်းတန်းလန်းနောက်တစ်ပုဒ်ဆက်လာပါတယ် ရင်လှုပ်၊...လှုပ်...ဘာညာ.. ဟူး... ကျွန်မခေတ်မမှီသေးဘူး။
Posted by စန္ဒကူး at 6:54 AM
အိမ်မှာခွေး (၄)ကောင်ရှိတယ်။ ပုလု၊ ပုလုသမီး ရှမီလာ နဲ့ မီးကီ၊ အထီးလေးက ယုန်ယုန်၊ ပုလုနဲ့ ရှမီလာကဗိုက် ကြီးတော့ ကလေးလေးတွေထပ်မွေးတယ်။ ကြောင်ကတော့ ကြီးမှမွေးတာ၊ ညီမလေးက မိဘမဲ့လေး ဆွေမျိုးလဲ မရှိဘူးတစ်ကောင်တည်းလျှောက်သွားနေတာသနားပါတယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲခေါ်မွေးထားတာ။ မိဘမဲ့မို့တော်တော့ တယ် ကြောင်က အရပ်လဲရှည်၊ ၀လဲဝ။။။ ပုံကိုသာကြည့်တော့။ ခွေးလေးတွေက အခုဆို ရင် ၁၀ကောင်ရှိပီ။
Posted by စန္ဒကူး at 10:43 PM
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကနေ တောင်ပေါ်တစ်ခါတက်ပါအုံးမယ်။ မန္တလေးကနေစစ်ကိုင်း၊ စစ်ကိုင်းကနေ ကလေးဝ၊ အဲဒီက နေတဆင့်ကလေးမြို့၊ မဟူရာတောနက်ကြီးကိုဖြတ် ဖလန်း၊ ဟားခါး ရောက်ခဲ့တုန်းက အကြောင်းလေး တွေကိုပြော ပြချင်လို့ပါ။ ကျွန်မအဖွားကဟားခါးချင်းဆိုတော့ ဟားခါးမြို့ရောက်တဲ့ အခါတစ်မြို့လုံးနီးပါးအမျိုး တွေ ချည်းပါဘဲ။ ခရီးသွားခဲ့တုန်းကအတွေ့ကြုံကတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာကောင်းလှတာမို့ ပြန်လာပီးနောက်ပိုင်းတစ်ခါမှာတွေး မကြည့်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒီမှာကျောင်းလာတက်တဲ့ မီဇို မိသားစုတစ်စုရောက်လာတော့ တောင် ပေါ်က ပဲပုပ်ခြောက်လေးတွေနဲ့ ငရုတ်သီး ခြောက်တွေ လက်ဆောင် လာပေးလို့ တောင်ပေါ်ဒေသ ကိုတစ်ခါပြန်သ တိရမိပါတော့တယ်။ တောင်ပေါ်မှာ အမဲသားဆို အတုံးအတစ် လိုက်ပြုပ်၊ ဆားနဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ တို့စားကြတယ်။ ပြောင်း ဖူးပြုတ်ကတော့ကျွန်အနှစ်သက် ဆုံးအစားစာ ဘဲ၊ပြောင်းဖူးအခြောက်ထွေကိုခြွေအခွံ ကွာအောင်ထောင်း ထားပြီး လှောင်ထားလေးရှိတယ်။ အဲဒါကိုပြုပ်၊ ဆားနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ထောင်း ပြောင်းဖူးပြုပ်ရည်နဲ့ အတူတွဲစား၊ တစ်ချို့ ကဂျင်းစိမ်းကိုအပြားလေှးီးပြီးတို့စား တတ်သေးတယ်။ ပြောင်းဖူးပြုပ်ရည်ထဲကိုကျက်ခါနီးမှာ ပဲရွက်၊ ဖရုံရွက် ၊ ဟင်းနုနွယ်စသည်ဖြင့် ထည့်ပြုပ်စားတယ်။ စားလို့အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်။ တောင်ပေါ်ထွက်အစားသောက် တွေထဲမှာ ပန်းသီး၊ ပြောင်းဖူး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ အောင်လောက် (ပဲစေ့တစ်မျိုးကိုအပုပ်ခံထားတာ)၊ ပဲအမျိုးစား တော်တော်များများ လဲတောင်ပေါ်ထွက်တွေပါဘဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ပဲပုပ်စေ့အခြောက်လေးတွေရလို့ပဲပုပ် အကြောင်းရေးမလို့ပါ။ ရှမ်းပဲပုပ်ကအရသာစိမ့်နေအောင်ကောင်းသလို၊ တောင်ပေါ်ချင်းတောင်ဖက်ကပဲပုပ် ကလဲအနံ့ဆူးရှရှနဲ့ အရသာလေးနက်လှပါတယ်။ ဆားမပါဘဲအခြောက်ခံထားတဲ့အတွက် ကြော်စားစား၊ ရေနွေး နဲ့စိမ်ပြီးဆီဆား နဲ့နယ်စားစား အရမ်းစားလို့အရသာရှိပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသမှာအခြောက်ခံထားတဲ့ပဲပုပ်စေ့ လေးတွေ၊ ပြောင်းဖူးစေ့တွေနဲ့ ငရုတ်သီးခြောက်တွေကိုအရမ်းအေးပြီး အပင်တွေစိုက်ပျိုးလို့မရတော့အတဲ့အချိန် ထိသိမ်း ထားပြီးစားလေ့ရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာရောင်းတဲ့ပဲပုပ်စေ့တွေလိုငံကျိကျိနဲ့အရသာမပေါ့ပါဘူး။ကျွန်မတော့ ရလာတဲ့ ပဲပုပ်လေးတွေနဲ့ငရုတ်သီးခြောက်လေးတွေကိုကြော်စားပါတယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 6:25 AM
သူများတကာတွေတော့မသိဘူး။ ကူးကူးတော့ ဂျီတော့ခ်ကတိုင်တယ်လေးတွေကိုတစ်ကူးတစ်ကဖတ်လေ့ရှိ တယ်။ အဲဒီစာတန်းလေးတွေက ကိုယ်စကားပြောချင်တဲ့အခါသူတို့အား၊ မအား၊ အိပ်ပျော်နေသလား၊ အပြင် ထွက်နေလား၊ အသဲကွဲနေလား၊ ပျော်ရွှင်နေလား စသည်ဖြင့်ဖတ်ပြီးခန့်မှန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆ
တယ်။ အင်တာနက်ကိုအလကားနီးပါးသုံးလို့ရသူအများစုနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်သူ အများစုက Offline ဆင်းနေတာ၊ Invisible နေတာအရမ်းရှားတရ်။ကျွန်မတော့ Invisible နဲ့နေပီး လာchatရင် လုံးဝကို
ပြန်မ ဖြေဘူး။ပုန်းလဲပုန်းတယ်လာလဲစကားပြောတယ်။ အဲဒီအတွက် Gtalk status မှာကောင်လေးတစ်ယောက်
Google ကလုပ်တဲ့ mail ကို ဂျီမေးလို့ခေါ်တယ်၊ ဂူဂယ်လ် ကထုတ်တဲ့ တော့ခ် ကို ဂျီတော့ခ် လို့ခေါ်
တယ်။ ဂျီတော့ခ်မှာပုန်း Invisible လုပ်ပီးနေတဲ့သူတွေကို ဂျီပုန်း လို့ခေါ်တယ်တဲ့။
ကျွန်မကို သူများကပြောတယ်။ နေ့နေ့ညည အိပ်တာကအစ၊ ဖျားရင်တောင်အွန်လိုင်းပေါ်တက်ဖျားတာရှား တယ်ဆိုဘဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။အိမ်မှာလဲအင်တာနက်ကရနေ၊ ရုံးမှာလဲအမြဲလိုလိုအွန်လိုင်းလုပ်ထားတော့ အမြင် ကပ်မယ်ဆိုလဲကပ်ချင်စရာ။ Gtalk, Yahoo Messanger, Skype သုံးခုကိုတော့အမြဲလိုလိုဖွင့်ထားတယ်။
YM ကတော့ရုံးတွင်းအချင်းချင်းနဲ့ အခြားနိုင်ငံကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ဖို့မဖြစ်မနေ ဖွင့် ထားရသလို၊ gtalk ကလဲမြန်မာပြည်ကသူတွေအတွက်သီးသန့်ဆက်သွယ်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ဖွင့်ထားရပါတယ်။ skype ကတော့တော်ရုံဝင်တာနဲပေမယ့် အာဖရိကဘက်နဲ့ တစ်ချို့သောအထူးအခွင့်ရေးပေးသူအတွက်တစ်ခါ တစ်ရံ သုံးရပါတယ်။ အိမ်ကရုံးအသွားလမ်းမှာတောင် အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ကွန်ပြူတာမပိတ်တာမို့ အွန်လိုင်းဖြစ်နေ တုန်းဘဲ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ခေါင်းစဉ်းလေးတွေတင်တင်ထားတယ်။ အပြင်သွားရင်သွားတယ်၊ အိပ်တယ်ဆိုအိပ်တယ်၊ အလုပ်များရင်များတယ်၊ ၀မ်းနဲ ၀မ်းသာနေမကောင်း စသည်ဖြင့်။
အိပ်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတာနဲ့ တန်းကနဲအိပ်လို့ရတာမဟုတ်အိပ်ပျော်ဖို့အချိန်ကယူရသေးတယ်။ တစ်ချို့တွေရှိ တယ်။ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှန်းသိရဲ့အတင်းဘဲmessage တွေရိုက် ပြန်မဖြေရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မလုံဘဲ ဘယ်သွား နေလဲပြန်မဖြေတာမာနကြီးတာလား၊ ဘယ်သူတွေနဲ့များ အသဲအသန်ပြောနေလို့ပြန်မဖြေတာလဲ စကားနာထိုး တတ်တဲ့သူတွေလဲရှိတယ်။ ကျွန်မစိတ်တိုအလုပ်များရင်တော့block ပစ်လိုက်တယ်။စကားနာထိုးတတ်တဲ့သူတွေ လောက်မုန်းတာမရှိဘူး။ဥပမာ၊ ကျွန်မအကြောင်းမသိတဲ့သူတစ်ယောက်က ကျွန်မဖုန်းမကိုင်လို့ယမ်းသမ်းပြီး လျှောက်စွပ်စွဲပြောခွင့်မရှိသလို၊ ကျွန်မဘယ်အချိန်ဘယ်မှာ၊ဘာလုပ်တတ်လဲသိသူတွေအနေနဲ့လဲ သိသိရက်နဲ့ စကားနာထိုးဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ Privacyရှိတယ်။အွန်လိုင်းတွေ့ရုံနဲ့ငါဘာမေးမေးအခွန်းတိုင်း
ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတဲ့တစ်ယူသန်စိတ်လက်ကိုင်ထားလို့မရဘူး။ အရေးအကြောင်းစကားပြောနေရင်းမှာတောင် အရေးပေးသင့်သူကိုပေးရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်မ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အလာ ပသလာပပြောနေချိန်မှာ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုအတွက်အင် တာနက် ကဖေးက်ုတစ်ကူးတစ်ကလာပြီးမေးတဲ့အခါကိုယ်ကသူ့ကိုဦးစားပေးရပီ။ မြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ကာလိုအလကားနီးပါးပေါခြင်းသောခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ အ၀ိုင်း.. ကထွက်နေတာ။
နားလည်မှုပေးခြင်း၊ မပေးခြင်းဆိုတာ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထားရင့်ကျက်မှု အပေါ်မူတည် တယ်လို့ ထင်တာ ပါဘဲ။ ဒီလိုပြောရင် အွန်လိုင်းပေါ်ကဆင်းနေပါလားပြောချင်မယ်၊ ကျွန်မအခုအခြေအနေ၊ အခုအနေ ထား၊လုပ်နေရတဲ့အလုပ်အနေထားအရ ဘယ်လိုမှဆင်းလို့မရတဲ့အခြေနေမှာ နားလည်မှုမပေးနိုင်တဲ့သူတချို့၊ တောင်းပန်ပါတယ် Gtalk Signal လေးနဲ့ Status စာတန်းလေးကို အလေးထားပေးကြပါလို့။
ကဲဒါတွေကိုအသာထားအုံးး.. အခုပြောချင်သေးတာက gtalkပေါ်ကစာတန်းလေးတွေကတစ်ခါတစ်လေအရမ်းရီ ရတယ်။ ဘယ်သူတွေဘယ်လို idea ရလို့ထွင်လဲမသိဘူး။ဖတ်မိတာနဲ့မပြုံးဘဲမနေမိအောင်ကို သဘော ကျမိ တယ်။ အဲလိုအတွေးလေးတွေရတတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်မသဘောကျတယ်။ကျွန်မချစ်သူဆိုသီချင်းရှိသမျှ အကုန်ဖျက်ဆိုတာပါးစပ်ထဲကထွက်တာနဲ့ပေါက်ကရတွေဘဲ။ တစ်ခါတစ်လေစိတ်ဆိုးခဲ့တာတောင်အော်အော် ရီမိခဲ့သေးတယ်။ အောက်မှာအများကြီးထဲကတစ်ချို့ကို ကျွန်မကူးချထားတယ်။
milmaw: ကောင်းကင်က တရားသူကြီး..... မြေကြီးက သက်သေ...... ကိုယ်က တရားခံ......
ပုဒ်မက ၁၅၀၀.... အပြစ်က ချစ်မိလို့..... စီရင်ချက်က အသည်းကွဲစေ....
(ဒါကတော့ တရားဟောဆရာလူပျိုလေးတစ်ယောက်ပါ၊ လွမ်းတာတောင်ချစ်တာတောင်
အသဲဆိုတာ1ခါကွဲပြီးရင်နာသွားတယ် နာတဲ့အတွက်ရောင်သွားတယ် ရောင်တဲ့အတွက်
(ဒါကတော့ ကျွန်မဘလော့အတွက်သုံးတဲ့ လိပ်စာထဲကကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ..
M Dream: “ဘေးကို ဘေးကို ဒီမှာရေကူးမလို့ ...”
(ဒီဟာလေးကတော့ သတင်းစာထဲက အင်းယားကန်မှာရေကူးတဲ့အကြောင်းပါပြီးနောက်
(ဒါကတော့စင်ကာပူကအကိုကြီးတစ်ယောက်ပါ.. ပြောသာပြောတယ် စွံပလွံသီးပါ...
ရုပ်ကခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေဝိုင်းနေသလား၊ ယင်ကောင်လေး
yam: ဟိုးဆရာ နတ်ကနားရှိတယ်..တောင်ပြုန်းပွဲမို့ လူအများကြီးပဲ...ရှေ့ကြည့်နောက်လှည့်ကြည့်
(ဒီ ဂျီတော့ခ် ပိုင်ရှင်ကတော့ သူ့ပုံမှာ ဓားတိုတစ်ချောင်းကိုကိုက်ထားပြီး အီစီကလီ
အကြည့်နဲ့ကြည့်နေပီး စာတန်းကိုအထက်ပါအတိုင်းရေးထားတယ်၊ ဘာကိုဆိုလို
thura09: U-ကို ချစ်နိုင်လောက်တဲ့ သတ္တိ I-မှာ မရှိသေးဘူး။
(india မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ သူလဲအချစ်တွေ့နေပီထင်
Mam: only 15days left to go back to YGN :) :) :) :) :) :)
ရဲ့ ရင်ခုန်သံပါ... ပျော်နေမှန်းသိသာတယ်း)
Posted by စန္ဒကူး at 7:22 AM
ချစ်သူရဲ့ အလင်း ငါ လိုတယ်..
ေ၀၀ါးဝါးနဲ့ အခါခါ မှောက်
Posted by စန္ဒကူး at 4:38 AM
သကြား (ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ၊ အချိုကြိုက်တတ်ရင်များများထည့်)
မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံ)
ညက်တညက်လေးအနေတော်လောက်ထားပြီး ဂျုံမှုန့်ထဲကိုသကြား၊ ဆားနဲငယ်
ထောပတ်ဆီလဲထည့်တယ်။ ရိုးရိုးဆီလဲသုံးလို့ရပါတယ်။ နဲနဲလေးအတွန့်တက်
ပြီး coffeemate အထုပ်သေးလေးတစ်ခုဖောက်ထည့်လိုက်သေးတယ်။
ခဏထားထားလိုက်ပါတယ်။မိနစ် ၂၀လောက်ဆိုရင်တော့ ဂျုံကိုအရှည်ဖြစ်
ပြားအောင်လုပ် ဗန်းပေါ်ဆီသုတ်ပြီးမုန့်ပြားလေးတွေတင်၊ ၁၈၀ ဒီဂရီနဲ့
မိနစ် (၄၀) ဖုတ်လိုက်ရင်..မွေးကြိုင်ပြီးကြိုက်တဲ့အချိန်စား၊ အထားလဲခံတဲ့
Posted by စန္ဒကူး at 5:23 AM
လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့၊ ထော်နဲထော်နဲ့သွားတဲ့ကားကိုမနက် (၄)နာရီလောက်မြောင်းမြက
စောင့်စီးရတယ်။ တစ်ရက်တစ်စီးဘဲရှိလို့လူကတော့ကျပ်တောင့်နေတာ၊ တစ်ခါ
ကျောင်းလေးရှိတယ်။ အဘွားအိမ်က တောင်အောက်ဘက်ကျတယ်၊ ချိုင့်ထဲမှာ
(ရေတွင်းနားမှာပေါ့) တစ်ရွာလုံးမှရေတွင်း (၃)တွင်းစု ထားတဲ့နေရာ (၂)နေရာ
ဘဲရှိတယ်။ သောက်ရေအတွက် ရေတွင်းကတော့အမိုးတွေဘာတွေရှိတယ်။
အိပ်ခန်းမရှိဘူး၊ ကာထားတာဘဲရှိတယ်။ တစ်ခြမ်းမှာမိန်းကလေးတွေအိပ်တယ်။
ဧည့်ခန်းမှာ ဦးလေးတွေနဲ့ အဖေအိပ်တယ်။ ကျွန်မကတော့ထုံးစံရောက်တာနဲ့
ဖျာခင်းပြီးအိပ်တာဘဲ။ မာမီတို့အဖေတို့ကတော့စကားတွေဖောင်ဖွဲ့၊ မောင်လေးနဲ့
အိပ်လို့နိုးပီဆိုရင် ဦးလေးလူးလူးက ကျွန်မကိုသေချာလာကြည့်ပီးရီပါတယ်။ သူက
လူပျိုကြီး၊ကျွန်မနိုးတာနဲ့စားဖို့ရှာတာဘဲ။ အဲအချိန်အဒေါ်အငယ်က တောထဲက
ဇရစ်၊ တပင်ရွှေထီး၊ ကောက်ကွေ့ညွှန့် တွေခူးပြီးပြန်လာပါတယ်။ အိမ်အောက်မှာ
စားမယ်မသတ်ပါနဲ့ပြောလဲ အဒေါ်က အကိုကြီးအမကြီးတို့လာလည်ရင်ကျွေးဖို့မွေး
ထားတာ၊ချက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး (မည်သို့ချက်သည်မသိ) မွှေးကြိုင်နေတာနဲ့အတော်
ကိုဗိုက်ဆာလာပါတယ်။ မပါမဖြစ် ငပိရည်ကျို( မျှင်ငပိကိုရေထည့်ပြီးကျိုတာပါ၊
ပျစ်ပျစ်လေးနဲ့ ကျိုပြီးရင်တော့အချိုမှုန့်နဲနဲခတ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ဖြူးထဲလိုက်တာပါ။
မပြောမရှိနဲ့အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ကြက်သားတောချက်၊ မျှင်ငပိရေကျို၊
ကြတယ်။ ရာသီချိန်လိုက်ပေါ့၊ ရေနွေးကြမ်းနဲ့၊ ဒီလိုနဲ့အဲဒီရွာလေးကိုကျွန်မအရမ်း
စကားတစ်ခုရှိတယ်၊ သိလ္လာရွာသူတွေကအရမ်းချောတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
သူတို့ချိုးတဲ့သောက်တဲ့ရေကြောင့်ဆိုဘဲ။ ဟုတ်ရင်လဲဟုတ်လောက်တယ်။ တစ်ရွာ
ဘဲ။ ကျွန်မကတော့ သွေး ၄ပုံ၁ပုံသာပါလို့အဲလောက်တော့မချောဘူးပေါ့။ :P
အောက်မှာချောင်းရှိတယ်။ အဲဒီချောင်က ရေချိုးကန်ကရေချိုးထားတဲ့ရေတွေနဲ့ညစ်
ညစ်တာ။ ၀ါးပိုးဝါးတွေတက်လိုက်ရင်လှုပ်စိစိနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်တယ်။ အရေးထဲ
တောကြောင်၊ တောကြက်အရိုင်း၊ တောခွေး..စသည်ဖြင့်။တစ်ခါမှတော့သေချာ
မတွေ့ဖူးဘူး. ဒါပေမယ့်ညဖက်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးတွေတွေ့ရတယ်။ အဖွားအိမ်
ကောက်ပြီးဝါးနှီးလေးနဲ့သီ၊ အဒေါ်လေကတောထဲမှာကွမ်းခြံရှိတယ်။ ကျွန်မလဲ
တယ်။ ချောင်းထဲမှာငါးတွေပုဇွန်တွေ၊ ပလောက်ပလောက်တွေအများကြီး။ ပ
သူလုပ်တဲ့တံမြက်စည်းကအရမ်းခိုင်တယ်၊ ကြိမ်နဲ့ယက်ထားတာ... ကားအိပဲ့ပဲ့နဲ့
ရွာအပြင်ထွက်လာရင်တော့ လက်ပြနေတဲ့အဒေါ်ဦးလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေရယ်
Posted by စန္ဒကူး at 9:07 PM
အလုပ်လုပ်ရင်တောင်စိတ်ကမဖြောင့်ဘူး။ FB ရဲ့ လယ်ကွက်ထဲကမထွက်နိုင်တာလဲ ပါတယ်။ အပင်စိုက်လိုက်၊ မြေတူးလိုက်၊ သူများလယ်ကွင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်လိုက် နဲ့မဟုတ်တာတွေရှုပ်နေတာဆိုးတယ်။ ကျွန်မပဲပင်ပေါက် (ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိလို့) ပဲပင်ပေါက်လိုတော့မရှည်ဘူး၊ တိုတုတ်တုတ်လေးတွေ။ အဲဒါလေးတွေကိုကြော်စား ရင် ၀ါးလို့ကောင်းတယ်။ အမဲလုံးကတော့လက်ဝင်တယ်။ အမဲသားကြိတ်ပြီးသားကို ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်၊ စပါးလင် အားလုံးညက်အောင်ထောင်း၊ ပြီးရင် အသားကြိတ်ထားတဲ့အထဲကိုရောမွှေ၊ စီးနေအောင်နယ်ပြီးလုံးကြော်ထားတာပါ။ လက်ဝင်ပေမယ့် စားလို့ကောင်းတယ်။ အကြာကြီးလဲအထားခံတယ်။ ဟင်းအနေနဲ့ ချက်စားစား၊ ပျင်းလို့ဘဲ ထိုင်စားစား၊ အသီးရွက်ထဲထည့်ကြော်စားစား၊ အတော်ကို အဆင်ပြေတယ်။ အကြာကြီးလဲချက်စရာမလိုဘူးလေ.း) စိတ်ဝင်စားရင်စမ်းကြည့်။
Posted by စန္ဒကူး at 9:06 AM
Posted by စန္ဒကူး at 10:31 AM
ကလွှင့်တဲ့ဇတ်လမ်းကိုကြည့်ပီး စွဲလမ်းမှုရောဂါစဖြစ်တာ လွင်မိုး ပါ။ သူပထမရိုက်တဲ့ကားလား
ကျောင်းခန်းထဲမှာ လွင်မိုး ပုံတွေဝယ်ပြီးကပ်...သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေကြည့်မရလို့
နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေဆွဲ၊ ပုံကိုလိုက်ဖျက်၊နဲ့..... လွင်မိုးရောဂါစွဲကပ်ပုံများ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတောင်
ဖွင့်လိုက်တာနဲ့လွင်မိုးပုံ။ မှတ်မှတ်ရရ လွင်မိုး ပုံအသေးလေးမွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ရဖူးတယ်။
အဲဒီပုံလေးအခုထိရှိတုန်းဘဲ..အပြင်မှာတွေ့ရင်မကြည့်ရဲဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လွင်မိုးရောဂါရပ်သွားတဲ့
အချိန်က သူလပ်ထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဘဲ။ သူ့ကိုမေ့ပစ်လိုက်တယ်....
တစ်ရက်.. အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေမကြိုက်တတ်တဲ့ကျွန်မ..မောင်လေးက Westlife အခွေဖွင့်နေတာ
ကိုသွားထိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်ကိုကြိုက်သွားပြန်ရော.. Shane ဆိုလား၊ ခေါင်း
ဆောင်လိုတစ်ယောက်အမြဲလိုလိုသူဆိုတာများတယ်။ သူ့ကိုတန်းတန်းစွဲ..အခွေတိုင်းကြည့်၊ ကြည့်
ပီးလဲထပ်ကြည့်...နောက်တော့ ကုလားကားတစ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ Amir Khan ကိုတွေ့တော့စိတ်
ကပြောင်းသွားပြီး westlife crush လေးကိုမေ့သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအမကြီးကပြောတယ်။
လေ) Bae Yong Jun ...ကြိုက်လိုက်တာမပြောပါနဲတော့..ကာလအတော်ကြာထိပါ..
ီDaniel Henny ကိုတွေ့သွားတဲ့အထိပေါ့.. ဒီတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်မချစ်သူနဲ့တော်တော်ဆင်
အခုလက်ရှိအထိသဘောကျနေတဲ့သူရှိပါသည်ပေါ့။ သူ့ကိုတော်တော်များများကကြည့်မရဘူး။ ကျွန်
Posted by စန္ဒကူး at 3:31 AM
ကြာစိ..စားဖူးကြလား။ ရန်ကုန်မှာဆိုအထုပ်လေးတွေနဲ့ရောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ
တာနဲနဲဘဲပါလို့ မာမီက ၂၆လမ်းဈေးသွားလို့လမ်းကြုံရင်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ရောင်းတဲ့
ကြာစေ့လေးတွေဝယ်လာပေးတယ်။ ဗိုက်ပြည်တဲ့အစားစာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေ
photo by: sandakuu at Thailand
နောက်တစ်မျိုးက ထန်းသီး... အညာမှာမွေးတယ်မပြောပါနဲ့၊ ကျွန်မထန်းသီးအရမ်း
ကြိုက်တာ။ နုနု၊ ရင့်ရင့်၊ ထန်းရည်..အင်းထန်းရည်အချိုလဲကြိုက်တယ်။ ထန်းရည်
အချည်ကိုတော့ယောင်လို့ ပြင်ဦးလွင်မှာ တစ်မော့သောက်ဖူးတယ်။ မူးလို့မဟုတ်။
အရသာကိုမကြိုက်တာ။ ခေါင်ရည်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ ခေါင်ရည်ကြောင်မူးရီရီလေး
ဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တာ။ ခေါင်ရည်တော့တောင်ကြီးမှာ မောင်လေးဝမ်းကွဲ (၄)
မုန့်ကျွဲသဲ.... ဒါတော့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးမြန်မာအစားစာ၊ မုန့်ကျွဲသဲကိုအုန်းသီးခြစ်
လေးနဲ့စားလိုက်ရလို့၊ အိမ်မှာတုန်းက အဖေကဈေးသွားတယ်။ သူပြန်လာရင်အရင်
ဆုံးပြေးပြီး ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ထုပ်ထားတဲ့မုန့်ကျွဲသဲ ပါမပါလိုက်ရှာရတာအမော။
ရေခဲခြစ်... မန္တလေးမှာကျောင်းတက်တုန်းက (၁၆ အ.ထ.က)မှာပေါ့၊ ရေခဲခြစ်ရောင်း
တဲ့ဦးလေးကြီးရှိတယ်။ ကျွန်မမုန့်စားဆင်းချိန်ဆိုအဲဒီအသည်ဆီပြေးတာပါ။ ရေခဲခြစ်
မြှားသုံးချောင်းကို ၅၀၀ ပေးရတယ်။ ၃ ချောင်းလုံးဘောလုံးပေါက်ရင် ဆုရတယ်ပေါ့။
စကိုယုံပြီး ၂၀၀၀ နဲ့ပစ်ခိုင်းလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ GIV ဆပ်ပြာတစ်တုံးနဲ့ဟော်
ဇီးဖြူသီးထောင်းသုပ် .... ဟိုသွားဒီသွားအဲဒီအထုပ်လေးကိုကိုင်ပြီးဝါးချွန်လေးနဲ့တူလို
ညှပ်စား၊ရေသောက်...အလုပ်ကိုဖြစ်နေတာ၊ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ဒီကလေးမ ညစ်
ပတ်နေတာဘဲထင်မလားတော့မသိ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့။ ဇီးဖြူသီးကိုထောင်းပြီး
ဆား၊ ချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မျှင်ငပိအမှုန့်အားလုံးရောထည့်ထားတာ.ပြောရင်းနဲ့တောင်
အမဲအူတုတ်ထိုး... သွားသွားခိုးစားလို့ခဏခဏအဆူခံရပါတယ်။ ညနေပိုင်းတွေဆိုမောင်
ထိုင်ထိုင်စားတာ၊ ညစ်ပတ်လားမပတ်လား၊ ဖုန်တွေများဝင်မလားမစဉ်စားပါ။ စားပါတယ်။
ခြံထဲပြန်ဝင်လာရင်တော့ မာမီ့ကိုလိမ်လို့ရပေမယ့် ခွေးတွေးကိုလိမ်လို့မရပါ၊ ပုလုခွေး က
အဆိုးဆုံး၊ အသားနံ့ရတော့လူပေါ်ခုန်တက်တော့မယ့်အတိုင်း....း)
ကြည့်ရင်မစားတတ်ဘူး။ လူတွေအများဝိုင်းအုံတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ အဲဒီ
မှာတင်ပတ်လျှောက်နေတာ ၄ခါလောက်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့သူငယ်ချင်း မင်းချမ်းသာကို
လှမ်းခေါ်ပြီး သူလဲအလုပ်ကနေပြေးလာပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးစားချင်လို့ဆိုတော့ရီပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ၁၇၀၀ လောက်ကျတယ်။
ကျွန်မမှတ်မှတ်ရရ အာလူးကြော်၊ နေကြာစေ့၊ ဇီးထုပ် စသည်စသည်မိန်းကလေးအများ